Omume Banyere Ndi Nwoke Banyere Jenda | Martech Zone
Omume ndi ahia banyere nwoke na nwanyi
Monday, March 5, 2012 Douglas Karr
Ndi akwukwo na G+ etinyela ihe omuma iji nye ufodu nuances banyere okike gbasara nwoke na nwanyi.
Ọbụnadị taa na gburugburu ebe obibi ịzụ ahịa, ilu ochie a na-ekwu na ụmụ nwanyị nwere mmasị n'ịzụ ahịa karịa ụmụ nwoke ka na-emetụta. Ma na ntanetị ma na-apụ apụ, ụmụ nwanyị na-eme mkpebi mkpebi ọzọ karịa ma na-elekarị ahụmịhe ịzụ ahịa karịa ndị mmekọ nwoke na nwoke. Ndị na-ere ahịa maara nke ọma mara na ha ga-edozi ozi ha na ndị ahịa ha chọrọ, yabụ taa, anyị na-enyocha usoro dị iche iche nwoke na nwanyị na nwanyị na ụfọdụ ụlọ ọrụ si erite uru na ha.
Tags: onye ahịaàgwà ndị na-azụ ahịausoro ndị ahịanwanyiokikeomume ịzụ ụmụ nwokemkpebi gbasara ịzụ ụmụ nwokeokike di ichenwoke
Oghere: Ahịa Ahịa Onlinentanetị
Nnwale weebụsaịtị gafee peeji ọdịda